विश्वनाथ खरेल सोमबार, जेठ १९, २०७७ मा प्रकाशित
नेपालको इतिहासमा १९ जेठ २०५८ रातिको दरबार हत्याकाण्ड नेपाली जनमानसमा एक दुःखद घटनाका रूपमा चित्रित छ । सो घटनामा राजा–रानीसहित राजपरिवारका १० जनाको एकसाथ ज्यान गएको त्यो घटनाले नेपालतर्फ विश्वकै ध्यानाकृष्ट गरायो । यो काण्ड भएको १८ वर्ष पूरा भई १९ वर्षमा लागेको छ । यो अत्यन्त पीडादायक घटना थियो । सो घटनामा मारिएका राजा वीरेन्द्र पृथ्वीनारायण शाहका वंशज, राजा त्रिभुवनका नाति र राजा महेन्द्रका सुपुत्र मात्र थिएनन्, आफ्नो कालखण्डमा संसारमै अत्यन्त सम्मानित, विशिष्ट राजनेता (स्ट्रेसम्यान) मध्ये एक थिए । मूलतः अमेरिका, चीन, सोभियत संघ, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटेन, भारतलगायतका धेरै राष्ट्रको भ्रमण गर्दा उनले पाएको ठूलो सम्मानले नेपाल र नेपालीको शिर ठाडो हुन्थ्यो ।
एउटा अल्पविकसित राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षले सुसम्पन्न र अति विकसित राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षहरूसँग संवाद गर्दा समसामयिक विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव दिन सक्छन् र त्यसले संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं महाशक्तिहरूलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ भन्ने कुरा राजा वीरेन्द्रले राम्रोसँग प्रमाणित गरेर देखाइदिए । यस हत्याकाण्डले विव्रmम संवत् १९०३ को कोतपर्वलाई समेत उछिनेको छ । केही दशकयता नेपाली राज्यले भोगेको सबभन्दा ठूलो प्रकृति सिर्जित संकट पाँच वर्षअघिको विध्वंसकारी भूकम्प तथा नाकाबन्दी पनि थियो भने त्यसअघिको अर्को राष्ट्रिय संकट दरबार हत्याकाण्ड थियो । ती दुवै त्रासदीलाई नेपाली राज्यले कमी–कमजोरीका बावजुद पार लगाएको छ ।
जहाँसम्म त्यो हत्याकाण्डको सूत्रधार को थियो ? भत्रे सदावहार प्रश्न हो, त्योचाहिंँ सायद इतिहासको रहस्यकै रूपमा रहनेछ । यस्तो रहस्य, जसको बारेमा कुनै दिन पूर्ण सत्य उजागर भयो भने पनि सबैले पत्याउने अवस्था नरहन सक्छ । दरबार हत्याकाण्डको पहिलो असर, राजतन्त्रमाथि नै पर्यो । मानिसले दरबारको जग कति कमजोर रहेछ भत्रे प्रस्टसँग देखे, जसले गर्दा त्यसप्रति रहेको परम्परागत जनविश्वास स्वाट्टै घट्यो । राजतन्त्रको वंशानुगत निरन्तरता स्वाभाविक भएमात्र टिक्ने रहेछ भन्ने पनि त्यसपछिको घटनाक्रमले देखायो । अस्वाभाविक परिवेशमा भएको ज्ञानेन्द्रको गद्दीरोहणलाई मानिसले बाध्यतावश स्वीकारेका थिए । तर उनको बढ्दो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले लक्ष्मणरेखा नाघ्यो र उनले ’कू’ गर्ने गल्ती गरे । त्यसले गर्दा आफूमात्र असफल भएनन्, राजतन्त्रलाई विस्थापन गर्ने कारक पनि बने ।
गोरखाबाट हिसाव किताव गर्ने हो भने झन्डै ४ सय ५० वर्षको शाहवंशीय राजतन्त्रकै अध्याय समाप्त भयो । अझ किराँत, लिच्छवि, मल्ल आदि राजवंशलाई जोड्ने हो भने त त्यो एउटा ’युग’ कै समाप्ति थियो । यसर्थ दरबार हत्याकाण्ड भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि यस्ता आशंका र जिज्ञासाहरू मेटिएका छैनन्, बरु अनेक अनुमान थपिँदै गएका छन् । यस्तो किन भयो भने आधुनिक नेपाली इतिहासको त्यो सनसनीखेज घटनाको जरोमा पुग्नेगरी अनुसन्धान नै गरिएन । उसबेला प्रधानन्यायाधीश र सभामुख रहेको एउटा टोलीले घटनास्थलको अवलोकन र प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान संकलन त गर्यो, तर कुनै निचोड निकालेन, न त त्यसपछि कुनै खोजबिन गरियो । कतिसम्म भने राष्ट्राध्यक्षको हत्यासहित त्यति ठूलो शाही संहार हुँदा तत्कालीन संसदमा समेत बहस भएन, न त राजनीतिक दलहरू गहिराइमा पुग्न चाहे । तत्तकालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्थापित गर्नेमै केन्द्रित भए, भलै तिनै राजाबाट पछि धोका पाए । पदमुक्त भएपछि चाहिँ उनले त्यो हत्याकाण्डलाई आफूले भन्ने गरेको ’ग्रान्ड डिजाइन’ को फर्मुलासँग जोडे, तापनि धेरै खुल्न चाहेनन् ।
मुलुकलाई सर्सर्ति हेर्दा इतिहास साक्षी छ, ठूल्ठूला घटना–दुर्घटनाबाट पाठ सिकेर धेरै राष्ट्रले अस्तित्वको रक्षा गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाएका छन् । राष्ट्रिय एकताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रहितको संवद्र्धन–सम्पोषण गरेका छन् । स्पेन, फ्रान्स र अस्ट्रेलियाले पटकपटक थिचोमिचो गरेपछि राष्ट्रलाई शक्तिशाली, निःस्वार्थी र विवेकशील नेतृत्व चाहिन्छ भत्रे इटालीका जनतामा चेतना आयो । वि.सं. २०४३ सालमा प्रधानमन्त्री भएका मरीचमानसिंह श्रेष्ठ राजा वीरेन्द्रसँग खुलेर छलफल गर्थे भन्ने कुरा उनका अन्तर्वार्ता र उनीसँगको कुराकानीका प्रसंगमा छर्लंग भएका छन् । वि.सं. २०४५ सालमा सेनाले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन लगायतका सामग्री झिकाउँदा भारतले १५ महिनासम्म नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्यो । भारतका विदेशसचिव एस. के. सिंह ६ बुँदे प्रस्ताव लिएर आए ।
अब भारतसँग मात्र हतियार कित्रुपर्ने, भारतको स्वीकृतिबेगर कुनै राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न नपाइने, व्यापार र पारवहनमा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने आदि विषय त्यसमा उल्लेख थियो । राजा वीरेन्द्रले सो प्रस्तावबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान खरानी हुन्छ भन्दै ठाडै अस्वीकार गरिदिए । त्यसपछि भारतले दिल्लीका नेता एवं पत्रकारहरूको हुल पठाएर राजा वीरेन्द्रको एकाधिकार र निरंकुशता तोडेर दलहरूका हातमा शासन व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्दै २०४६ सालको आन्दोलन सुरु गरायो । चन्द्रशेखर, हरकिशनसिंह सुरजित, सुब्रमव्यम् स्वामी, एम.जे. अकबरलगायतका नेताले राजा वीरेन्द्र ’तानाशाह’ हुन् भन्दा नेपालका कैयन् नेताले थप्पडी बजाए । बिपीका जेठा छोरा प्रकाश कोइरालादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यसमेत धेरै राष्ट्रवादीहरू २०४६ सालको आन्दोलनका पक्षमा थिएनन् ।
वि.सं २०२८ साल माघ १७ गते राजा महेन्द्रको असामयिक स्वर्गाराहेण भएपछि युवराज वीरेन्द्र नेपालका राजा भए । राष्ट्रियता, विकास र प्रजातन्त्रलाई मुख्य आधार बनाएर उहाँले शासनको बागडोर सम्हाले । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सदैव अक्षुण्ण रहोस् भत्रे अभिप्रायले उहाँले देशवासीलाई लगातार घच्घच्याइरहे । राजा महेन्द्रले ५३ राष्ट्रसँग कूटनीति सम्वन्ध स्थापना गरिसकेकाले धेरैजसो राष्ट्र नेपालबारे अनभिज्ञ थिएनन् । विश्वमञ्चमा नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदै गएको र नेपालले हजारौँ वर्षदेखि बचाएको स्वतन्त्रता, एकता र अखण्डता अन्य देशका लागि समेत उदाहरणीय बनेको सन्दर्भमा त्यसबेला संसारले नेपाललाई सुक्ष्म रूपमा हेरिरहेको थियो ।
वि.सं २०३८ साल भदौ १६ गते पेरिसमा आयोजित अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा राजा वीरेन्द्रले गरेको सम्बोधन संसारमै चर्चित र प्रशंसित बत्र पुग्यो ।
धनी राष्ट्रहरूले अल्पविकसित राष्ट्रका पीडा, व्यथा, अभाव, बेरोजगारलगायतका गम्भीर समस्याबारेमा स्पष्ट नीति बनाएर सकारात्मक काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव र आग्रह थियो । उनले भाषणमा अभिव्यक्त गरेका हृदयस्पर्शी शब्दहरूले त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहभागी द्रवित र भावविभोर बत्र पुगे । अल्पविकसित राष्ट्रहरू (अफगानिस्तान, नेपाल, लाओस, भुटान, मालदिभ्स र समोआ) सहभागी भएको सो राष्ट्रसंघीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले दरिद्रताको चित्रण गरे । त्यस्तै गरी नेपाललाई सदैव सुरक्षित, स्वतन्त्र, शान्त र समुत्रत बनाउने अभिप्रायले राजा वीरेन्द्रले २०३१ साल फागुन १३ गते (शुभराज्याभिषेकको भोलिपल्ट) शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखे । आफ्नो शुभराज्याभिषेकमा काठमाडौंमा उपस्थित भएका विभित्र देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखसमक्ष उनले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भत्रे प्रस्ताव राखेका थिए । यसमा १ सय १६ राष्ट्रले समर्थन गरे पनि भारतले दुराशयपूर्वक त्यसको समर्थन गरेन ।
समग्रमा भन्नुपर्दा हाल आएर हाम्रा छिमेकीहरु भारतले देशको विभिन्न सीमानाहरुमा गरी ७४ स्थानमा सीमाना मिचेको छ भने त्यस्तै गरी चीनले पनि केही उत्तरी नाकाहरुमा सीमाना मिच्ते क्रम रोकिएको छैन् । तर, तत्कालिन समयमा राजा वीरेन्द्रले भारतीय आव्रmामकताको सामना गर्ने एकमात्र कार्ड चीनलाई बनाए । राजा बत्रेििबत्तकै महेन्द्रकालमा संरक्षण पाएका तिब्बती खम्पाहरू विरुद्ध सैन्य कारबाही गरे, जसबाट भारत–अमेरिका दुवै चिढिए । राजपरिवार र भारतको सत्तारुढ गान्धी परिवारबीच कहिल्यै विश्वासको सम्बन्ध रहेन । २०४५ सालमा चीनबाट विमानभेदी अस्त्रहरू ल्याएपछि भारतले नाकाबन्दी नै लगाइदियो र पञ्चायत विरोधी जनआन्दोलनलाई समर्थन गर्यो । जनआन्दोलनकै बीचमा भारतले एउटा सम्झौता प्रस्ताव राख्यो, जसमा हस्ताक्षर गरेको भए नेपाल भुटानको हैसियतमा पुग्ने निश्चितप्रायः थियो । वीरेन्द्रले मुलुकलाई त्यो मोडमा जोगाए, जनआन्दोलनको भावनाअनुरूप राष्ट्रिय शक्तिहरूसँगै सम्झौता गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा गरे ।
आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा उनले दिल्लीसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास पनि गर्दै थिए, त्यो सफल नहुँदै हत्याकाण्डमा ज्यान गयो । ब्रिटेनको इटन कलेज र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालय तथा टोकियो विश्वविद्यालयको अब्बल शिक्षाले मात्र राजा वीरेन्द्रको व्यक्तित्वलाई विराट् र उच्च बनाएको होइन । राजदरबारमा परिवारबाट पाएको संस्कार, तालिम, राष्ट्र र जनताप्रति पिताको समर्पण, अदम्य एवं अतुल्य प्रेम एवं राष्ट्रलाई सुदृढ, समृद्ध र युगानुकूल बनाउनुपर्छ भत्रे संचेतनाले राजा वीरेन्द्रलाई सदैव उत्प्रेरित गरिरहेको पाइन्छ । उहाँको जीवनकाल (२००२ पुस १४ गतेदेखि २०५८ जेठ १९ सम्म) अध्ययन गर्दा व्यक्तिगत सुखसयल, भोगविलास, मोजमज्जा र अर्थहीन कुरामा उनले समय बर्बाद गरेको पाइँदैन । पलपलको सदुपयोग गरे राजा वीरेन्द्रले । अतः राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा दुईवटा प्रमुख घटनालाई विश्वका सञ्चारमाध्यम र कूटनीतिज्ञहरूले धेरै महत्व दिएको पाइन्छ । २०३६ सालमा उनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाबारे लोकसम्मति बुझ्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह गराउने घोषणा गरे । त्यस्तै २०४६ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सट्टामा बहुदलीय प्रणालीको पुनःस्थापना गराए । ब्रिटिस मोडलको संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्ने उहाँ नेपालका प्रथम राजा हुन् । त्यसैले, पश्चिमका सञ्चारमाध्यमले समेत उनलाई प्रजातान्त्रिक र उदार राजा भनेका छन् ।